मेलेरोको मेन्डर, प्रकृतिको एक वास्तविक सनक | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | Ecotourism, España
Melero को meender प्रकृति को एक whim रूपमा वर्णन गरिएको छ। तपाईंलाई थाहा छ यसलाई मेन्डर एक भनिन्छ तीर मोड्नु कुनै पनि नदीको जसले भूमि अवतल र अर्को उत्तलको एक भाग छोड्दछ।
तर मेलेरोको कुरा गर्दै, यो घुमाउनु अलागान नदी यो यति पापी छ कि यसले लगभग एक टापुलाई जन्म दिन्छ। जे भए पनि, एक अद्वितीय परिदृश्य सिर्जना गर्नुहोस् जुन जंगली परिवेश र प्रकृतिसँग यसको उत्तममा फिट बैठ्छ। यदि तपाईं प्रान्तमा यस रत्न भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यार्सिस, हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्नको लागि हौसला दिन्छौं।
1 मेलेरोको म्यान्डर कहाँ छ?
2 Melero को meender मा के गर्ने
2.1 जनावर अवलोकन: bellowing
2.2 पैदल यात्रा
3 भूगर्भको एक बिट: भ्यागुता कसरी गठन भयो?
4 मेलेरोको म्यान्डर कहिले भेट्ने?
5 Melero meender वरिपरि के गर्ने?
मेलेरोको म्यान्डर कहाँ छ?
जस्तो हामीले तपाईंलाई भनेको थियौं, यो प्राकृतिक आश्चर्य भेटियो Castilla y León को साथ Extremadura को सीमा। अधिक विशेष रूपमा, यो Cáceres क्षेत्रमा अवस्थित छ लास हरर्ड्स। सबैभन्दा नजिकको शहर हो Ríomalo de Abajoबदले, नगरपालिकाको सम्बन्धित मोरिस्को रोड.
तसर्थ, म्यान्डरमा जानको लागि उत्तम तरिका भनेको रोमालोबाट हो। पालैपालो, यो शहर पुग्न, तपाईंसँग दुईवटा काउन्टी सडकहरू छन्। यदि तपाईं उत्तरबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त हुन्छ SA-225, जबकि, यदि तपाईंले दक्षिणबाट गर्नुभयो भने, तपाईंले लिनु पर्छ पूर्व २०० 204। एक पटक रोमालोमा, तपाईंसँग एक छ वन ट्र्याक त्यो तपाइँलाई सिधै melero को मेन्डरमा लैजान्छ।
Melero को meender मा के गर्ने
तार्किक रूपमा, पहिलो चीज तपाईं मान्डर क्षेत्रमा गर्न सक्नुहुन्छ यसको अद्भुत परिदृश्यको आनन्द लिनुहोस्। यो गर्नका लागि उत्तम स्थान पोइन्ट भ्वाइसपोइन्ट भनिन्छ पुरानो, जहाँबाट तपाईंसँग यस प्राकृतिक आश्चर्यको एक सही लहर परिप्रेक्ष्य छ।
तर तपाईको मेलेरोको मेन्डर भ्रमणले तपाईंलाई अन्य धेरै सम्भावनाहरू पनि प्रदान गर्दछ। रोमालो डे अबाजो छोडेको केही समय पछि, तपाईं भव्य पाउनुहुनेछ प्राकृतिक पोखरी यसले नदी लद्रिलर बनाउँछ जहाँ तपाईं आरामदायी नुहाउन सक्नुहुन्छ।
जनावर अवलोकन: bellowing
तपाईं त्यसपछि उक्त मार्ग अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ जुन पाइन र चेस्टनट रूखहरूको बीचमा बग्दछ माथि दर्साइएको दृश्यमा पुग्न। यसमा एकचोटि, तपाईं केवल मेन्डरको भव्य दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। यो स्पट प्रजातिहरू जस्तै सन्दर्भका लागि पनि सन्दर्भ बिन्दु हो ग्रिफन गिद्ध, ला कालो सारस वा बुटे बुरुज.
त्यस्तै गरी, तपाईलाई अलागानको किनारमा हिरण पिउने कुराको मूल्यांकन गर्न गाह्रो छैन। र पनि, सही समयमा, यो अवलोकन गर्न एक भव्य सेटिंग छ धनु। तपाईलाई थाहा छ, यो समयको नाम हो जब हिरण तातो छ र शरद coतुसँग मिल्छ। पुरुषहरूले गट्टुरल ध्वनि उत्सर्जन गर्दछन् र उनीहरूको छेउछाउको छेउछाउको लागि क्षेत्र चिह्नित गर्दछ, प्रकृतिमा एक अनौंठो दृश्यलाई जन्म दिन्छ।
तपाईं तल झिल्ली भित्र जान पनि सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, ला एन्टिगुआ पुग्नु अघि, तपाईंसँग काँटा छ जसले तपाईंलाई यस प्राकृतिक घटनाको सिधामा पु takes्याउँछ। यस बिन्दुमा तपाईले यसको विशाल दृश्य दृश्यको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ सियरा डे बजार.
रोमामलो शहरबाट नै त्यहाँ धेरै पर्वतारोहण मार्गहरू छन् जसले तपाईंलाई दर्शनीय परिदृश्य रमाईलो गर्न मद्दत पुर्याउँदछ कि झरना र यसको वरपरको वातावरण बनाउँदछ। ती मध्ये, तथाकथित Verea de los Aceituneros। सँग उल्लेख गरिएको इलाकामा सामेल हुनुहोस् कुण्डल र यो लगभग बीस किलोमिटर छ। तपाईं यो पैदल मात्र गर्न सक्नुहुन्न तर साइकल र कार द्वारा पनि। तर, जे भए पनि तपाईले अद्भुत शंकुधारी वनहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
सुख्खा मौसममा एल मेलेरो
अर्को शानदार मार्ग हो माछावाला Verea। यो धेरै सरल छ, किनकि यो केवल तीन किलोमिटर लामो छ। यो ठीकै देखिन्छ, रोमालोबाट ला अँटिगाको दृश्यमा जान्छ र तपाईंलाई शानदार वनस्पति प्रदान गर्दछ।
अघिल्लोसँगसँगै, तपाईं मार्फत जान सक्नुहुन्छ चोर्रेन डेल ताजो मार्ग, जो एक प्रभावशाली झरना मा समाप्त हुन्छ; त्यो La चरण डे ला मोरा, जहाँ तपाईं रेट carvings फेला पार्नुहुनेछ जस्तै पेट्रोग्लिफ जसले यसलाई यसको नाम दिन्छ, र त्यो स्रोत ला तेजा। संक्षिप्तमा, अन्य गतिविधिहरू जुन तपाईंले मेलेरो मेन्डरको भ्रमणको बेलामा गर्न सक्नुहुनेछ माछा मार्दै हुनुहुन्छ र डु can्गा वा क्याटमारनबाट तल जाँदैछन्। ती सबै अतुलनीय वातावरणमा।
भूगर्भको एक बिट: भ्यागुता कसरी गठन भयो?
यद्यपि वास्तवमै चाखलाग्दो कुरा यसको अनौंठो परिदृश्यको मजा लिनु हो, यो मेन्डर कसरी सिर्जना भयो भनेर जान्न पनि उत्सुक छ। यी प्राकृतिक घटनाहरु को बारे मा धेरै सिद्धान्तहरु छन्। तर भूगोलसँग सम्बन्धित एकले भने यसको उत्पत्ति भूमिमा अवरोधहरूसँग गर्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, एक बलिया बार। यसले नदीको प्रवाहलाई बनाउँदछ, तिनीहरूलाई बचाउनको लागि, डाइभर्ट गर्नुहोस्। र इरोशनले बाँकी काम गर्दछ कि घुमाउने पानी मार्ग ठीक गर्न।
मेलेरोको म्यान्डर कहिले भेट्ने?
वर्षको कुनै पनि समय म्यान्डर हेर्न आउनको लागि तपाईंलाई राम्रो छ। यद्यपि हामी तपाईंलाई सल्लाह दिन्छौं कि यो तपाईलाई अलागान नदीको बाढी मौसममा गर्न सकिन्छ वसन्त वा पतन। कारण ज्यादै सरल छ: नदीले अधिक पानी बोक्ने क्रममा, यो घुमाउरो र टापु जुन यो लगभग पूरा गर्दछ राम्रोसँग सराहना गरिन्छ।
Melero meender वरिपरि के गर्ने?
जस्तो कि हामीले तपाईंलाई व्याख्या गर्यौं, यस प्राकृतिक अचम्मको क्षेत्रको बीचमा छ लास हरर्ड्स र अधिक विशेष नगरपालिका मा मोरिस्को रोड। सबैभन्दा नजिकको फार्महाउस वा सानो ग्रामीण गाउँ हो Ríomalo de Abajo, जहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो महिलाको दु: खको चर्च, जसले एउटै नामको शहरको संरक्षक संतको नामको कुमारीको छवि राख्छ।
तर यी Hordan फार्महाउस को हाइलाइट छ लोकप्रिय वास्तुकला। घरहरू स्लेट ढु stones्गाले बनेका छन् र छाना पनि समान सामग्रीले बनेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार घर बनाउने यस तरिकालाई प्रायद्वीपको उत्तरपश्चिमको पाल्लोजासँग जोडेको छ र पूर्व-रोमी मूल भएको छ, अझ विशेष गरी सेल्टिक।
अर्कोतर्फ, क्यामिनोमोरिस्कोको नगरपालिकाका अन्य फार्महरूमा पनि तपाई रमाइला स्मारकहरू देख्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी मा क्याम्ब्रोन्सिनो तपाईसँग छ सान्ता क्याटालिना वा लास Lástimas को चर्च, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित, जुन सम्भवत सम्पूर्ण क्षेत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कलात्मक भवन हो।
अन्तमा, Melero को meender यो एक अद्वितीय र दर्शनीय परिदृश्य, प्रकृति को एक वास्तविक सनक रूप। र, उहाँको छेउमा, तपाईं क्षेत्र भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ लास हरर्ड्स, एक भूमि जहाँ यसको परम्परागत वास्तुकला बाहिर खडा छ। तपाईलाई यस क्षेत्रमा यात्रा गरे जस्तो लाग्दैन Extremadura? यो एक कदम टाढा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » मेलेरो मेन्डर
Almería को न्यूडिस्ट तटहरू जुन तपाइँले भ्रमण गर्नुपर्दछ